စုံစမ်းစစ်ဆေးပင် မှအကောင်းဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေးပင် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကိုအပြည့်အဝ-line တွေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့ကျယ်ပြန့်ဖောက်သည်တွေ, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်တင်ပို့ခဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးပင်ကျမတို့ကနိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးချပြီးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအပ်နှံထားသောထံ၌အလုပ်လုပ်သော၏ကစားသမားအရည်အချင်းပြည့်မီခဲ့ပြီ။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ဖောက်သည် '' လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးပြည့်ထုတ်ကုန်တွေထောက်ပံ့ဖို့ခက်ကြိုးစားကြတယ်။ အဆင့်မြင့်သောပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းပညာ၏အခြေခံပေါ်မှာကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများအတွင်းတင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, သိပ္ပံနည်းကျစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ multi-လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်အားကိုးထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ရာပူဇော်သက္ကာကိုကြသည်။ ကျနော်တို့အနာဂတ်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကြိုဆိုပါတယ်။
အမြင့် Temp စုံစမ်းစစ်ဆေး
အကောင်းဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေးပင် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးပင် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်
ပယ်လေဒီယမ်အလွိုင်းစုံစမ်းမှုများသည်မြင့်မားသည်-အနိမ့်တောင်းဆိုမှုများအတွက်အသုံးပြုအရည်အသွေးမြင့်သတ္တုစပ်-စွမ်းအင်လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်.Paliney7သည်ပယ်လေဒီယမ်ဖြစ်သည်-ငွေအသက်-hardenable အလွိုင်း.သတ္တုစပ်သည်နှစ် ၅၀ ကျော်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသက်တမ်းရှိပြီးအလွန်ရှည်လျားသောသက်တမ်းအတွက်လိုအပ်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်,တည်ငြိမ်သောအဆက်အသွယ်ခုခံမှုနှင့်အနိမ့်လျှပ်စစ်ဆူညံသံ.Paliney7၏အင်္ဂါရပ်များသည်မြင့်မားသောချေးခြင်းနှင့်သံချေးတက်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်,beryllium ကြေးနီ၏စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများပေးစဉ်.အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်လမ်းညွှန်စနစ်များပါဝင်သည်,ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေး,မြင့်သည်-မြန်နှုန်းစလစ်ကွင်း,နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဝေမှုစနစ်များ.Paliney7သည်လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်သတ္တုစပ်များအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်.
စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုလေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပစ္စည်းလေးမျိုးရှိပါတယ်:tungsten,ရီနီယမ်အဖြိုက်နက်,ဘီရီလီယမ်ကြေးနီ,နှင့် Palinery-7TM.ရီနီယမ်အဖြိုက်နက်ကိုများသောအားဖြင့်ရွေးချယ်ပါသည်.သူတို့ထဲတွင်,rhenium tungsten သည် tungsten နှင့်ဆင်တူသည်. ပစ္စည်း:Tungsten(WNP),ရီနီယမ်အဖြိုက်နက်(WRNP),P4,P7,ဘီစီ သတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည် စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖောက်သည်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်နမူနာအရသိရသည်လုပ်နိုင်ပါတယ် တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့ မူရင်းထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ:အမေရိကန် ပြုပြင်ရာအရပ်:ထိုင်ဝမ်
အဖြိုက်နက်သည်အလွန်ပါးလွှာသောအပ်ဖြစ်သည်-သိပ္ပံနည်းကျတူရိယာများအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အလွိုင်း၏ချွန်လျှပ်ကူးပစ္စည်း.အဆိုပါလျှပ်ကူးပစ္စည်းတုံးအစွန်အဖျားနှင့်တစ် ဦး ချွန်အောက်ခြေရှိပါတယ်.၎င်းသည်ဒဏ်ခံနိုင်သောသတ္တုစပ်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်-လှည့်၏ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးနှင့်အတူကြီးမားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းနည်းလမ်း.အရည်ပျော်သောအောက်စီဂျင်ကိုဖယ်ရှားပြီးသိသိသာသာအစားထိုးနိုင်သည်.ရေကန်တိုင်.Tungsten သည်သတ္တုများအကြားအမြင့်ဆုံးသောအရည်ပျော်မှတ်ဖြစ်သည်.၎င်းကိုဝိုင်ယာကြိုးတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်.ဒါဟာမြင့်မားသောသို့လုပ်နိုင်ပါတယ်-မြန်နှုန်းသံမဏိ,သံမဏိတူး,စသည်တို့.သံမှထည့်သွင်းလာသောအခါ.၎င်းသည်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်ချေးခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,နှင့်ပွတ်တိုက်အားဖြင့်ဖြစ်ရတဲ့အပူမြင့်မားသောကြောင့်ယိုယွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပုံပျက်သောကြောက်လန့်ခြင်းမရှိ.အဖြိုက်နက်၏အသုံးပြုမှုနှင့်သုတေသန၌တည်၏,အကျော်ကြားဆုံးတစ်ခုမှာအက်ဒီဆင်သည်မီးသီးများပြုလုပ်ရန်အဖြိုက်နက်ကိုအသုံးပြုသည်,အရာလူသားများအတွက်တောက်ပသောကာလ၌အစပြု.Tungsten needles များသည်စမ်းသပ်ခြင်း pads များကိုစမ်းသပ်သည့်အခါအသုံးအများဆုံးစုံစမ်းသည့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်,နှင့်ဖြန့်ဖြူးသောအပ်များသည်ခဲယဉ်းမှုနှင့်တာရှည်ခံသက်တမ်းရှိသည်,နှင့်ဆွေမျိုးစမ်းသပ်မှုခြစ်အတော်လေးကြီးမားလိမ့်မည်.ဖြည့်စွက်ကာ,အဖြိုက်နက်၏အပ်များကိုသေချာစွာစစ်ဆေးသည်.
ရီနီယမ်-tungsten ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့် semiconductor တွင်အသုံးပြုသည်,အယ်လ်အီးဒီ,LCD နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ,နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးကတ်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်,စုံစမ်းစစ်ဆေးဘူတာ,chip ကိုစမ်းသပ်ခြင်း,wafer စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် LED chip ကိုစမ်းသပ်ခြင်း.ရီနီယမ်-tungsten ဆေးထိုးအပ်များသည်မာကျောမှုနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှု.ရီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစမ်းသပ်ကဒ်ပြားများ-tungsten ဆေးထိုးအပ်များသည်ကြာရှည်စွာအသုံးဝင်ပါသည်-သက်တမ်းစမ်းသပ်ခြင်း,ဒါပေမယ့်ရီနီယမ်၏ကုန်ကျစရိတ်-tungsten ကအပ်များက tungsten needles ထက်နိမ့်ပါတယ်.ရီနီယမ်၏ကုန်ကျစရိတ်-အဖြိုက်နက်သည်အခြားအဖြိုက်နက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားပါသည်. .အဆိုပါပစ္စည်း-rhenium နှင့်ဆက်စပ်သောဂုဏ်သတ္တိများ-tungsten အပ်များဟာ tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့်ဆင်တူသည်.၎င်း၏ elasticity နှင့် conductivity သည် tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့်တူညီသည်,နှင့်၎င်း၏အဆက်အသွယ်ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေး၏သက်တမ်းထက်သာ။ ကောင်း၏.